Amai Amazon Sales Central basa sei?
Vatengesi paIndaneti vanosarudza kutengesa zvigadzirwa zvavo muAmazon vanofanira kusarudza pakati peAmazon mutengesi wepakati uye Amazon mutengesi wepakati. Izvi zvinoshanda sei uye zvipi zvingakanganisa sarudzo yako? Iyi mibvunzo yandichapindura mune iyi pfupi. Tichavhara musiyano pakati pevatengesi vepakati uye mutengesi wekutengesa uye tinokurukura mazano ekutanga ezvose. Tine tarisiro, ruzivo urwu ruchakubatsira iwe kuti unzwisise kuti ndeupi sarudzo inoshanda zvakanaka mubhizinesi rako.
Pane zvingarudzo zviviri chete zvaungatengesa mazairo pane Amazon trading trading platform - sevhisi (mune mamwe mashoko semutengesi wekutanga) uye semutengesi (wechitatu wepambidzani). Amazon inoshanda zvakasiyana nevatengesi vekutanga uye vatatu. Kuti unzwisise kusiyana uku iwe unofanira kutanga uchinzwisisa kuti unganzwisisa sei vatengesi nevatengesi.
Sezvo mutengesi wekutanga, iwe uchashandisa Vendor Central sewe muparidzi kana muiti. Sezvo mutengesi, iwe unotengesa zvigadzirwa zvako muhombe kuAmazon, uye Amazon, zvakare, inodhura zvinhu izvi pasi pezita rayo mazita kune vatengi. Munyaya iyi, Amazon inowana chikamu chekutengesa. Zvisinei, nepurogiramu iyi, kutakura uye kutakura kwose kunofungidzirwa neAmazon. Zvinhu zvinowanikwa neVendor Central vashandise zvinogona kusiyaniswa nehotera "Ships kubva uye inotengeswa neAmazon."
Sezvo mutengesi wechitatu, unofanira kushandisa Amazon Sales Central. Uyezve, semutengesi, unogona kushandisa Amazon Sellers Fulfillment (FBA). Izvo zviri nyore nokuti maererano nepurogiramu iyi, Amazon inotakura zvose zvamairairo ako pachako. Zvimwe, iwe unogona kubata zvose nzira dzekutumira iwe pachako..
Zvimwe zvinowanikwa neAmerica Sales Central uye Vendor Central
Vatengesi veIndaneti vanofarira kushandisa madiki mu Amazon mazano vanogutsa neAmerican Seller Central. Izvo zvichakupawo mukana wekutara mitengo shoma yezvigadzirwa zvako uye kuramba uchikwikwidzana mukati memichero yako. Chimwe chikomborero ndechokuti iwe unogona kuisa chero mutengo waunofunga kuti unoshanda kune zvaunodya. Zvinoreva kuti kana iwe uchida kusimudzira pfungwa yehutano, unogona kuzviita nyore nyore.
Amazon inotaura kuti ichapa mubayiro chero zvipi zviduku zvitsva zvekutsvaga mari. Zvisinei, vatengesi ivavo vanoshandisa Vendor Central vanogona kurwisana neshoko iri nokuti chaizvoizvo Amazon haimboiti saizvozvo.
Maererano neAngos akaisa vatungamiri, chero mutengo wemumwe mutengesi unofanira kuenzaniswa. Zvinoreva kuti nokukurumidza apo mumwe munhu anozivisa Amazon pamusoro pemutengo wakaderera pane chimwe chigadzirwa kunze kwechikwata ichi, mari yezvibereko ichaderera. Izvo zvakaoma kuti Amazon iwedzere mutengo zvakare ku MAP.
Kana ichienzaniswa neVendor Central, vatengesi veCent Central vanowedzera kutonga pamusoro pemari. Zvisinei, kune vaya vari kutsvaga kubatana kwakanaka neAmazon, Vendor Central inopa mikana yakawanda.
Kana tichitaura pamusoro pekugadzirisa kushanda, Amazon Seller Central inopa kuwedzera kushanduka. Iwe unogona kushandura nyore nyore mazita, kururamisa kune zvinyorwa zvinyorwa uye tsanangudzo pamwe nekuvandudza mifananidzo yako.
Kugumisa, ndinoda kutaura kuti ini ndinoshandisa kushandisa Amazon Sales Central sezvo inopa zvimwe zvipo uye rubatsiro. Uyezve, ini ndinogara ndichitsvaga kune Mutengesi Sangano Rutsigiro Source .